(နျူးကလီးယား လက်နက် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
This ဆောင်းပါး may require cleanup to meet Wikipedia's quality standards. Please improve this ဆောင်းပါး if you can. The talk page may contain suggestions. (13 April 2017)
1945 ခုနှစ် ဂျပန်နိုင်ငံ နာဂါစာကီမြို့အား အက်တောမစ်ဗုံး ကြဲချပြီးနောက် ပေါက်ကွဲစဉ် မြင်တွေ့ရသည့် မှိုပွင့်သဏ္ဌာန် မီးခိုးလုံးကြီး။
ဆိုင်ကလိုထရွန်မှာ အလွန်အသုံးဝင်သော အက်တမ်ခွဲ ကရိယာဖြစ်၍ ထိုကိရိယာ၏သဘောကို အကျဉ်းမျှ သိထိုက်ပေ သည်။ ဆိုင်ကလိုထရွန်၏ အလယ်တွင် ခွန်အားအလွန်ကြီးမား သော လျှပ်စစ်သံလိုက်ရှိသည်။ သံလိုက်၏ ဝင်ရိုးစွန်းများကို လက်မအနည်းငယ်စီခြား၍ တစ်ခုပေါ်တစ်ခု ဆင့်ကာ တပ်ဆင် ထားသည်။ သံလိုက်တို့၏အကြားတွင် ကျယ်၍တိမ်သော ပြောင်းလုံးပုံပြည့်အခန်းကို ထည့်သွင်းထားသည်။ ထိုအခန်းတွင် တစ်ဖန် ပြောင်းလုံးပုံဝက် အခန်းနှစ်ခုကို မျက်နှာချင်းဆိုင်ချ ထားသည်။ ထို ပြောင်းလုံးပုံဝက် အခန်းများကို ဒီး ဟုခေါ် သည်။ ဒီးတို့ကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဓာတ်မလိုက်အောင်လည်း ကောင်း၊ ပြောင်းလုံးပုံပြည့် အခန်းမနှင့် ဓာတ်မလိုက်အောင် လည်းကောင်း ပြုလုပ်ထားသည်။ ထိုအခန်းများတွင် ဟိုက်ဒြို ဂျင်၊ ဒျူတီရီယမ် (ဟိုက်ဒြိုဂျင်လေး)၊ သို့မဟုတ် ဟီလီယမ်ကို ဖိအားနည်းနည်းနှင့် ဖြည့်ထား၏။ အသုံးပြုသောဓာတ်ငွေ့၏ အမျိုးအစားကိုလိုက်၍ ဓာတ်အားရမြူမှုန်များသည် ပေါဆီထရွန် များ၊ ဒျူတာရွန်များ၊ သို့မဟုတ် အာလဖာမြူမှုန်များဖြစ်ကြ သည်။ ဆိုင်ကလိုထရွန်မှ အက်တမ်ကိုဖြိုခွဲရန် ထွက်လာသော ဓာတ်အားရမြူမှုန်များသည် တစ်စက္ကန့်လျှင်မိုင်ပေါင်း ၂ဝဝဝဝ ခန့် မြန်ရှိန်နှုန်းဖြင့် ထွက်လာသည်။ ထိုမြန်ရှိန်နှုန်းမှာ ရိုင်ဖယ် သေနတ်ကျည်ဆံ၏ မြန်ရှိန်နှုန်းထက် အဆပေါင်း ၃၅,ဝဝဝ ခန့်မျှ ပို၍လျှင်မြန်သည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အဏုမြူ_လက်နက်&oldid=406019" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၅ ဇွန် ၂၀၁၈၊ ၁၉:၃၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။